Team Secret ကိုအနိုင်ယူပြီး Mad Moon Dota2ချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့ Nigma | Duwun
Major ဝင်ခွင့်ရော Minor ဝင်ခွင့်ရော ဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေခဲ့တဲ့ Nigma အသင်းကတော့ WePlay! Dota2Tug of War: Mad Moon ချန်ပီယံဆုကိုရယူပြီး သူတို့လက်စွမ်းကိုလျော့တွက်လို့မရကြောင်း သက်သေပြလိုက်ပါပြီ။
WePlay! Dota2Tug of War: Mad Moon ပြိုင်ပွဲဟာ DPC အမှတ်ပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပေမယ့် လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Dota2အသင်းလို့ဆိုရမယ့် Team Secret, ကစားသမားအသစ်တွေနဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ တစ်ချိန်က CIS ဘုရင် Virtus.pro, ဖျက်မြင်းကောင်းအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Gambit Esports နဲ့ Ninjas In Pyjamas တို့လိုအသင်းတွေပါဝင်တာကြောင့် တော်တော်လေးကိုမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရှိပြီး ကြည့်ရတန်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ချန်ပီယံ Nigma အသင်းဟာလည်း Grand Final မှာ Team Secret ကို 0:2 နဲ့ ရှုံးနိမ့်နေရာကနေ 3:2 နဲ့ ပြန် Comeback ပြီး အနိုင်ရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒီဆုဟာ သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ Group Stage ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Infamous နဲ့ NiP အသင်းတို့က နိုင်ပွဲမရရှိဘဲ အုပ်စုအဆင့်နဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရပြီး Group A က Team Secret နဲ့ Group B က Virtus.pro အသင်းတို့က အုပ်စုဗိုလ်များအဖြစ်နဲ့ Semifinal ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ Gambit, B8, Nigma နဲ့ Aggressive Mode တို့ကတော့ Quatarfinals ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ပြီး B8 နဲ့ Aggressive Mode တို့ကတော့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် 5th-6th နေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ Gambit, Nigma, Virtus.pro နဲ့ Team Secret တို့ ၄ သင်းသာကျန်ခဲ့ပြီး Gambit က စတုတ္ထနေရာ၊ Virtus.pro က တတိယနေရာနဲ့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Team Secret က ဒုတိယနေရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကစားသမား ၂ ဦးအပြောင်းအလဲလုပ်ထားတဲ့ Virtus.pro ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ Nigma အသင်းရဲ့ တစ်ကျော့ပြန်လက်စွမ်းတွေကတော့ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ဖျော်ဖြေနိုင်စွမ်းကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံ Nigma အသင်းက ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၃၀၀၀၀ ကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိတဲ့ Team Secret အသင်းက ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၆၀၀၀၀ ကိုလည်းကောင်း စသဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းအားလုံး ဆုကြေးအသီးသီးရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ MVP ဆုကို အခြားသောပြိုင်ပွဲတွေလို ၁ ဆုတည်းချီးမြှင့်တာမဟုတ်ဘဲ The Best Core နဲ့ The Best Support ဆိုပြီး ၂ ဆုတောင်ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။
The Best Core ဆုကို Nigma ရဲ့ Offlaner ကြီး Mind_Control ကရရှိသွားခဲ့ပြီး The Best Support ဆုကိုတော့ အသင်းခေါင်းဆောင် Kuroky က ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ MVP ဆု ၂ ဆုအတွက် ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ စီ ကိုလည်း ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ Mad Moon ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပေမယ့် တတိယမြောက် Minor ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Starladder ImbaTV ပြိုင်ပွဲက မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်တာကြောင့် နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲ ၁ ပွဲထပ်ကြည့်ရဖို့ ၁၀ ရက်ခန့်သာ စောင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Nigma အသင်းကတော့ Minor ပြိုင်ပွဲကိုတောင် ဝင်ခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့အတွက် စတုတ္ထမြောက် Major Qualifier မှသာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါတယ်။ စတုတ္ထမြောက် Major Qualifier စတင်ဖို့ကလည်း ၁ လ ကျော်ခန့်ကြာဦးမှာဆိုတော့ Nigma အသင်းကစားတာကို ကြည့်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ လည်ပင်းရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်မျှော်ရဦးမှာပါ။